Dowladda oo Xabsiga dhigtay nin dhawaan rasaaseeyay dad Banaanbax ku dhigaayay Muqdisho | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dowladda oo Xabsiga dhigtay nin dhawaan rasaaseeyay dad Banaanbax ku dhigaayay Muqdisho
Dowladda oo Xabsiga dhigtay nin dhawaan rasaaseeyay dad Banaanbax ku dhigaayay Muqdisho
Wasiirka amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa ka hadlay Nin ku hubeysnaa Bistoolad oo 25-kii bishii December 2020 Magaalada Muqdisho ku rasaaseeyay dad dhigaayay banaanbax looga horjeeday Madaxweyne Farmaajo.
Wasiir Xundubey ayaa waxa uu sheegay in Ninkaas hubeysnaa uu ka tirsan yahay Ciidanka dowladda Federaalka gaar ahaan kuwa Booliska, isla markaana xiligii uu dadka rasaaseynayay inuu ahaa dharcad, wuxuna falkaas ku tilmaamay inuu ahaa qalad dhacay.
Waxaa uu sheegay Wasiirka in durbadii lasoo xiray ninkaas oo si bareer ah dad dhigaayay banaanbax looga horjeeday Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo rasaas dushooda ku riday, isagoo weliba Bastoolad uu watay dhowr mar ku handaday.
Dadkii uu rasaaseeyay ayaa waxa ay ahaayeen Saddex Gabdhood & wiil ku dhawaaqaayay erayo ay ku diidan yihiin Madaxweyne Farmaajo, balse ninkaasi awood Hub uu u adeegsaday oo uu rasaas la dhacay.
Previous articleKhayre iyo Qoorqoor oo ka wadahadlay muranka raggaadiyay doorashooyinka
Next articleMaxkamadda Ciidamada oo xukun dil ku riday Askari horay dil u gaystay